Milkiilaha Man City Sheikh Mansour walaalkiis oo iibsanaya koox ka dheesha horyaalka Premier League – Gool FM
(England) 27 Maajo 2019. Sida ay sheegayaan wararka laga helayo guda Ingiriiska, nin ay ilmo adeer yihiin milkiilaha kooxda Manchester City ee Sheikh Mansour ayaa iibsanaya kooxda ka dheesha horyaalka Premier League ee Newcastle United.
Mike Ashley oo ah milkiilaha haatan ee Newcastle ayaa diyaar u ah inuu kooxda ku iibiyo adduun lacageed gaaraya 350 milyan oo gini, sida warbixinnadu ay tilmaamayaan.
Ninka iibsanaya kooxda Newcastle United ayaa la sheegay inuu yahay Sheikh Khaled bin Zayed Al Nehayan oo ay ilmo adeero yihiin milkiilaha kooxda Manchester City ee Sheikh Mansour bin Zayed Al Nehayan.
Wargeyska The Sun ayaa daabacay in durba la saxiixay heshiisyo u dhexeeya labada dhinaca, waxaana loo gudbiyey maamulka horyaalka Premier League, iyadoo milkiile Mike Ashley uu diyaar u yahay inuu iska iibiyo kooxda Newcastle oo uu milkiile ka ahaa muddo dhan 12 sanadood.
Sheikh Khaled oo iibsanaya kooxda Newcastle United ayaa xubin ka ah qoyska boqortooyo ee Abu Dhabi, waana mid ka mid ah ganacsadayaasha ugu fiican Waddanka isutagga Imaaraadka Carabta, sidoo kalena waa shaqsigii horay isugu dayey inuu 2 bilyan gini ku iibsado kooxda Liverpool sanadkii la soo dhaafay, inkastoo uu arrintaas ku guuldarreystay.
Milkiile Mike Ashley ayaa markii ugu horeysay ee uu u isku dayo inuu iibiyo Newcastle waxa ay ahayd sanadii 2008, labo jeer oo kale ayuuna Mike Ashley suuqa soo dhigay kooxda Newcastle.
Dhinaca kale Sheikh Mansour waxa uu markii hore doonayey inuu sanadkii 2008 iibsado kooxda Newcastle, balse waxa uu ugu danbeyn iibsaday kooxda Manchester City oo uu ka dhigay kooxda ugu fiican Ingiriiska waqtigaan la joogo.
Waxa uu Sheikh Khaled diyaar u yahay inuu maalgashi weyn ku sameeyo kooxda Newcastle United haddii uu milkiyaddeeda la wareego, iyadoo Milkiile Mike Ashley lagu eedeeyay inuusan maalgashi fiican ku sameynin kooxda sanadihii u danbeeyay.
Mike Ashley waxa uu xiriir xun la leeyahay taageerayaasha kooxda, iyadoo Newcastle aysan wax koob ah ku guuleysan tan iyo sanadkii 1969-kii.